प्रधानन्यायाधीश जबराको पक्षमा देखिँदै बहुमत न्यायाधीश
काठमाडौं, २९ कात्तिक । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै इजलास बहिष्कार गर्दै आएका छन् । निरन्तर इजलास बहिष्कार गर्दा न्यायाधीशहरुको आलोचना बढ्न थालेको छ । यसप्रति गम्भीर हुँदै केही न्यायाधीशहरु इजलासमा फर्कने भएका छन् । आज नेपाल बार एशोशिएसनले सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुसँग सामूहिक छलफल गरेकोमा ६ जना न्यायाधीश अनुपस्थित भए । […]
महाभियोग प्रस्तावसँगै प्रधानन्यायाधीश जबरा स्वतः निलम्बनमा
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसद सचिवालयमा महाभियोग दर्ता भएपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । संविधानको प्रावधान र नेपालको अभ्यासका आधारमा उनी स्वतः निलम्बनमा परेका हुन् । संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ मा भनिएको छ, ‘उपधारा २ बमोजिम महाभियोग कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउने छैन ।’ संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यका...
वैकल्पिक गेटबाट प्रवेश गरे सर्वोच्चका १९ न्यायाधीश
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा रोक लगाउन भन्दै मूल गेटमा कानून व्यवसायीहरू धर्नामा बसेपछि न्यायाधीशहरूलाई वैकल्पिक गेटबाट भित्र प्रवेश गराइएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबरा बाहेकका न्यायाधीश महान्यायाधिवक्ता कार्यालयतर्फको गेटबाट अदालत प्रवेश गरेका हुन् । बारको धर्नालाई लक्षित गरेर कारण सर्वोच्च अदालत परिसर रामशाह पथमा बाक्लो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । अन्य दिनमा न्यायाधीशहरू मूल गेटबाटै सर्वोच्च प्रवेश गर्ने गरेका थिए ।
काठमाडौं, १० कात्तिक । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्तिमा हुँदै आएको सेटिङ भत्काउँदै लगेको खुलेको छ । राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरुको सिफारिशमा न्यायाधीश बन्ने परिपाठीलाई कमजोर बनाउन जबरा लागेको बुझिएको छ । दलीय भागवण्डाका आधारमा पैसाको चलखेल गरी न्यायाधीश बन्ने गलत परम्पराको अन्त गर्न खोज्दा उनी केही कानुन व्यवसायीहरुको प्रहारमा परेका छन् । […]
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबरा वाध्यकारी रुपमा रहनुपर्ला ?
काठमाडौं, ८ असोज । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश रहने वा नरहने विवाद टुंगो लगाउन सुनुवाई बढेको छ । न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र मनोजकुकार शर्माको इजलासमा सुनुवाई बढेको हो । प्रधानन्यायधीशविनाको संवैधानिक इजलास गठन हुन सक्ने वा नसक्ने भन्ने बहस अदालतमा पुगेको हो । अधिवक्ता दिपकविक्रम मिश्र र डा. गणेश रेग्मीले छुट्टाछुट्टै रिट दायर भएकोमा इजलासमा पेसी […]
सशस्त्र डीआईजी श्रेष्ठको मुद्दाको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश चुडालको इजलासमा हुने
मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश ढुंगानाको इजलासमा